Top Top Ten Things To Do in Old San Juan
Old San Juan ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisisa muPuerto Rico yose. Haina mabhishi, hapana mahotera emahotera, uye hausi huzhinji hwakaisvonaka hwepanyama. Zvarinazvo ndezvemakore anopfuura mazana mashanu ezvakanyorwa, dzakanaka zvekuvakwa kwemakoloni zvakasvibiswa nemavara ezvikoti uye magic asingagumi anoita kuti ive imwe yenzvimbo dzinonakidza zvikuru muCaribbean. Iwe unogona kupedza maawa akawanda anofara achingofamba-famba muguta rakakomberedzwa nemasvingo. Asi kana iwe uchida kuona zvakanakisisa zvekare Old San Juan, heyi pane zvakanakisisa zvadzo gumi.
Enda kunzvimbo dzakakosha
El Morro Fortress. Walter Bibikow / The Images Bank / Getty Images
Zvichida hapana chinotora nhoroondo yePuerto Rico kupfuura zvigaro zvekare zveSan Juan. El Morro neCastillo de San Cristobal ndevamwe vezvivakirwo zvakashanyiwa zvikuru pachitsuwa ichi nokuda kwechikonzero chakanaka. Nzira dzavo, ramparts, uye kuchengetedzwa kwemavara zvakachengetedza guta rakakombwa nemasvingo kwemazana emakore. Kunyangwe imba yegavhuna, La Fortaleza , inonzi "Nhare" nekuti yaiva imwe yenzvimbo dzekugadzirisa dzimba dzokudzivirira.
Kudya kuPuerto Rico kunowanzova chiitiko chinogutsa, kana uri shure kweCaric classics, gourmet international cuisine, kana kushamwaridzana kwekunakidza kweCaribbean uye kupisa pasi rose. MuChechi yeSan Juan, Fortaleza Street yakave yakakurumbira seParamendi Row iyo inosanganisira zvimwe zvekudya zvakanakisisa muguta. Zvechokwadi, South Fortaleza, kana kuti "SoFo," sezvazviri kuzivikanwa, kunyange ine yega yegore rechipiri yekudya.
Pakati pezvokudya zvaunowana pano ndezvi:
Zvechokwadi, haufaniri kuzvidzivirira ku Fortaleza Street kuti uwane zvokudya zvakanaka muguta rekare. Asi zvakasiyana-siyana uye hutano hunowanikwa apa hunoita kuti uve bheji yakanaka yekudya kukuru.
Tora Kutarisa kweStsetting Paseo la Princesa
Raíces Fountain. George Oze Photography / Getty Images
Paseo La Princesa inofamba yakakura inotangira kubva pedyo nehokwe iri pasi peguta uye inotungamirira kuRaíces rakanaka Fountain. Pakupera kwevhiki, iwe unogona kuwana mhando dzose dzezvikwata zvinowanikwa mumugwagwa, uye zvichida kunyange kusununguka mutsika kunobatsira. Paseo La Princesa inogadzirisa yekare rutivi rusvingo rweguta, uye kunze kwechocho chitubu chinopfuurira chakakomberedza Old San Juan kuSango Juan, iro roga rakasara rezvishanu kupinda muguta rekare.
Nguva yakanakisisa yekufadzwa nekufamba ndiyo nguva yekuvira kwezuva apo iwe uchava nemafungiro akanaka emuhara kubva patsime uye iwe uchapukunyuka kupisa kwezuva.
Enda Salsa Dhani
Salsa nePuerto Rico vanoenda pamwe chete, asi zvinoshamisa kuti chitsuwa chacho hachina kunyatsoputika nemakamuri matsvene eSalsa. Nenzira yakanaka, nzvimbo yangu yaunofarira kune inonakidza inorarama music Salsa inogona kuwanikwa mu Old San Juan, nzvimbo yangu yaunofarira kunonakidza mararamiro anonzi Salsa anogona kuwanikwa mu Old Old Juan muNyyorican Café .
Tarisa Imba yaPonce deLeón
Imwe yezvigadzirwa zvekare kare muguta rekare, La Casa Blanca yaiva mbiri yakakwirira yekutanga uye musha kumhuri yekutanga yekutonga. Iwe ungangodaro wakanzwa nezvemunhu akaita nhaka yake kutsvaga Tsime reImangwana reVechidiki. Zvakanaka, asati asimuka achidzinga kusafa, akavaka imba iyi, uye mhuri yake yakagara pano kwemakore mazana maviri. Mazuva ano, imba iri rwendo rwakaisvonaka kubva kumashure, uye chimwe chezvinhu zvemitambo zvekare veSan Juan.
Farira Guta pausiku
Tarisa mazamu akanaka, mabhairi , uye makirabhu muSan Juan. Uchawana vakawanda vavo muChechi yeSan Juan, guta rinozivikanwa nokuda kwekushanda kwaro usiku. Ingave iwe unofarira nzvimbo yechikwata chechic (edza Dragonfly kana Marmalade), grungy uye funky bars (El Batey inotungamirira iyo pack) kana kuti multi-level discos (Club Lazer), Old San Juan hainzwi yakwegura kana zuva ravira.
Shanyira La Rogativa
Pazvifananidzo zvose zvakanaka mu Old San Juan, sei tisingaregi La Rogativa? Ndinofunga kuti ndeyekuti nyaya inotaurira. Iyo chivigiro, chiri mukona yakanyarara yeguta pedyo neSango Juan, inorangarira imwe yenhau dzakawanda dzinopikisa dzePuerto Rico.
Muna 1797, vaBritain vakarwisa Old San Juan; akawandisa uye akatarisana kukundwa, mupirisita akatungamira rwendo rwechitendero kuburikidza neguta racho. VaBrithani, vachinyengedza vagari venyika kuti vatsigire, vakasiya kubatwa.
Bhuku re Nighttime Walking Tour of the City
Dare reSan Juan rakanaka masikati, asi zvechokwadi magilisi usiku. Uye kune mafambi maviri anoratidza iwe guta usiku nenzira inokosha.
Debbie Molina's Night Tales rwendo runoshamisa rwendo rweguta rekare. Debbie anokutora mukati mezvivako zvausingawanzoona usiku uye zvinokurudzira nemifananidzo inofadza kubva kare.
Leslie Padró's Flavors of San Juan inobatanidza anecdotes yemukana ane mukana wekunakidza ndiro pane dzimwe nzvimbo dzekudya.
Enda Souvenir Kutenga
Traditional vejigante masks. Walter Bibikow / Getty Images
Puerto Rico ine zvishamiso zvinogadzirwa nemaoko. Hapana chakakanganisika ne t-shati kana girazi, asi kana iwe uchida chimwe chinhu chepakutanga, chitsuwa ichi chine unyanzvi hwakanaka uye mhizha, uye iwe unogona kuwana zvakawanda zvekusarudza mu Old San Juan. Kubva pamasikisi ane mashizha anowanikwa mumashamba akawanda kusvika kumaoko anovezwa nemaoko kumaputi ePanama kuOlé, chiyeuchidzo kutengesa muSan Juan inorapwa.
Tsvaga yeArt Galleries
Guta rekare inzvimbo yevashandi, uye ine dzimba dzakawanda dzemifananidzo dzakakodzera kutarisa. Kutungamira urongwa ndeyeGalería Botello inoshamisa, asi haisi nzvimbo chete yekuratidzira zvakanaka mahara nemagariro emunharaunda.
Kuwedzera Kwekurapa Kwekurapa muPuerto Rico
Calendar of Events muPuerto Rico
5 Zvikonzero Zvokushanyira Guánica, Puerto Rico
Kuwana Bling Best Best Buck Yako
New Zealand Inotyisa Miti Nemhuka
Zvinhu Zvingaitwa Negore Rutsva Idzva muRaleigh, Durham, uye Chapel Hill
Tsvaga Dzimba Dzisina Kuchengetedza muPenienix
Washington, DC Area Krisimasi Chiedza Zvinoratidza 2017
Kurindira Tsika yeNational Soccer Play muPeru
Travel Guide kuMontreal munaOctober
7 Inozivikanwa kuNew York City Department Stores
Vatungamiri Gumi Vanotungamirirwa Nenzira Yese Yevatariri muIceland
10 Anosarudza Kuchengeta Vana Vakanaka muAlbuquerque
Ziva Kuziva Oklahoma City's Council Wards